Wasaaradda Warfaafinta XFS oo Dakhligii ay qabatay ku wareejisay Wasaaradda Maaliyadda – Radio Muqdisho
Wasaaradda Warfaafinta XFS oo Dakhligii ay qabatay ku wareejisay Wasaaradda Maaliyadda
Si loo hormariyo hanaanka Dowlidnimada loona mideeyo maamulka dakhliga dhamaan Hay’addaha dawliga ah, ayaa maanta Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Dowlada Federaalka ay ku wareejisay Wasaaradda Maaliyada Dakhliga soo galo maadaama ay u xilsaaran tahay in ay halmeel isugu geyso.
Kadib kulan ay ku yeesheen xarunta Wasaaradda Wasiirka Warfaafinta, Wasiirka ku xigeenka Wasaaradda Maaliyada iyo masuuliyin ka socotay labada wasaaradood.
Wasiirka Wasaaaradda Warfaafinta Daahir Maxamuud Geelle ayaa sheegay in ay muhiim tahay in la mideeyo hanaanka maamulka dakhliga taasoo ula jeedadu tahay in la gaaro hufnaan maaliyadeed.
Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocoow Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Maaliyadda ayaa sheegay in hanaankan Maaliyadeed uu damaanad qaadayo in si hufan loo maamulo dakhliga dawladda.
Horey ayay Wasaaradda Maaliyadda dhowr Wasaaradood ugala wareegtay dakhliga ay uruuriyeen, taas oo lagu shubay Bankiga dhexe ee dalka.
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed oo kormeeray Saldhiga Booliska magaaladda Baydhabo
Ra’iisul wasaare Kuxigeenka dalka oo cadeeyay in ka-hortagga Musiibooyinka ay muhiimad weyn u leedahay bulshada Soomaaliyeed